Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Keflavik na-ebupụta ụzọ Schengen mpaghara njikwa kiosk dabere na njedebe njikwa njikwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Technology » Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Keflavik na-ebupụta ụzọ Schengen mpaghara njikwa kiosk dabere na njedebe njikwa njikwa
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • News • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Taa, mmejuputa kiosks anọ mere na ọdụ ụgbọ elu mba Keflavik (KEF) na Iceland. Kiosks ahụ bụ akụkụ nke onye ọkwọ ụgbọ ọnwa isii iji mee ka ihe ntinye chọrọ nke ntinye / ụzọ ọpụpụ (EES) nke Mpaghara Schengen, nke mejupụtara steeti 26 dị na Europe bụ ndị kagburu paspọtụ na ụdị njikwa ikike ndị ọzọ niile. ala. Nke a bụ izizi akpaaka dabere na kiosk dabere na njikwa njikwa na a Onye otu Schengen ala.
EES bụ akụkụ nke ngwungwu Smart Border nke European Commission gosipụtara. Ọ ga-arụ ọrụ zuru oke na mba niile nke Schengen site na njedebe nke 2021. Ebumnuche bụ isi nke EES bụ ịdebanye aha data na nbanye, ọpụpụ na ịjụ ntinye nke mba nke atọ na-agafe ókèala mpụga nke mba ndị otu Schengen niile site na etiti sistemụ.
KEF bụ ebe kachasị agafe na mba ahụ nwere ihe karịrị pasent 95 nke ndị njem na-abanye na mpaghara Schengen site na Iceland na-abịa n'ọdụ ụgbọ elu a. Kiosks dị maka ndị mba nke atọ (TCN) na ụmụ amaala EU iji mee ihe mgbe ha na-abanye Iceland. Emebere kiosks ahụ iji gboo ihe ndị uwe ojii Icelandic chọrọ.
"Anyị nọ na Isavia na-achọkarị ụzọ iji bulie ma melite akpaaka ọrụ nke onwe maka ndị njem anyị," Gudmundur Dadi Runarsson, Director Technical and Infrastructure Director na Keflavik Airport na-ekwu. “Site na ị na-anya onye ọkwọ ụgbọ ala maka ihe ọhụụ ọhụrụ a ọhụụ anyị chọrọ ịnakọta ozi ma kwadebe onwe anyị iji mee ka usoro a dịrị onye ọ bụla mfe mgbe etinyere iwu ọhụrụ ahụ. Klọ ọrụ ọhụrụ ndị a ga - enyere aka mee ka ndị njem mee ngwa ngwa, meziwanye ahụmịhe ha ma hụ na njem dị ụtọ site na ọdụ ụgbọ elu Keflavik ga - enyekwa ozi dị mkpa maka mmepe na arụmọrụ nke mpaghara ọhụrụ anyị a tụrụ anya na a ga-arụ ọrụ na 2022.
Na Julaị 2018, kiosks izizi na-adịgide adịgide iji nye ikike nchịkwa na Ntinye na Europe wepụrụ nke 74 kiosks nwere ike biometric na Pafos International Airport na Larnaka International Airport na Cyprus.
Ha na-eji kiosks na-arụ ọrụ nke onwe ha iji mee ka usoro njikwa ókèala dị ngwa. Na kiosk, ndị njem na-ahọrọ asụsụ ha, nyochaa akwụkwọ njem ha ma zaa ajụjụ ole na ole dị mfe. Kiosk ahụ na-esekwa onyinyo nke ihu onye njem ọ bụla enwere ike iji ya tụnyere ma gosipụta ya na foto ahụ na paspọtụ kọmputa ha. Ndị njem na-ewereziara ha akwụkwọ nnata zuru ezu na ndị ọrụ nke ókèala.
Kiosks ndị a gosipụtara iji belata oge ichere ndị njem site na karịa 60 pasent. N'ime akwụkwọ InterVISTAS bipụtara na nso nso a, ọmụmụ ahụ kwubiri na iji kiosks maka njikwa oke gosipụtara ọpụpụ ọdịnala ọdịnala ọdịnala na onye ọrụ oke. Nke a na - ebute ego na nchekwa ohere ma na - enye ndị ikike oke ikike ilekwasị anya na nchekwa nchekwa oke. Kiosks ndị a na-enye njikwa njikwa dị mma, enwere ike ịnweta ndị nwere nkwarụ, enwere ike ịhazi ya ruo asụsụ 35 dị iche iche. Ọ nwere ike ịhazi njem ọ bụla, gụnyere ezinụlọ ndị na-eme njem otu.